Dowladda FS oo looga digay in ay qalalaase ka abuurto Doorashada Puntland (Daawo) - Muqdisho Online
Home Wararka Dowladda FS oo looga digay in ay qalalaase ka abuurto Doorashada...
Dowladda FS oo looga digay in ay qalalaase ka abuurto Doorashada Puntland (Daawo)
Ex. Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa ka digay fara-gelin uu sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya ku hayso doorashada madaxtinimada Puntland oo haatan maalmo kooban ka harsan yihiin.
Mudane Cabdi Barre ayaa sheegay in xukumadda Federaalka Soomaaliya ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada Muqdisho,gaar ahaanna xaafadda wardhiigle ee ay ku taallo xarunta madaxtooyada Soomaaliya,islamaarkaana wuxu sheegay in dowladdu ay ku mashquulsantahay burburinta maamulada dalka ka dhisan ee Federaalka ah.
Sidoo kale Cabdi Barre ayaa sheegay in maalmaha soo socda Puntland ay ku soo wajahan yihiin siyaasiyiin laga so xawilay magaalada Muqdisho oo lo so diray in ay qalalaase ka abuuran doorashada Puntland,sida uu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyntii, wuxuu shacabka Puntland ugu baaqay in ay ka digtoonadan fara-gelinta uu sheegay in xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku khal-khal gelinayso doorashada Puntland ee maalmaha yar ka harsan yihiin.
Previous articleBeesha Dhulmahante oo ka dalbatay Maxamud Saleebaan In ay MW wareejiyaan
Next articleSomaliland oo ku adeeysay Puntland abaabul Maleeshiyo